စမုန်နက်လက်ဖက်ရည် - အကျိုးကျေးဇူးများကဘာလဲ။ စိတ်အေးအေးထားပါ? အဲဒါကိုမင်းအိပ်ချင်အောင်လုပ်သလား။ ဘယ်လိုလုပ်ရ?
အစာ	 31 ဒီဇင်ဘာလ 2018
လက်ဖက်ရည်ကြိုက်သူများအတွက်စမုန်နက်လက်ဖက်ရည်သည်အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ လှေခါးသည်မွေ့လျော်ခြင်းအပြင်လူတို့၏ကျန်းမာရေးနှင့်သုခချမ်းသာအတွက်ကောင်းမွန်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ထို့ကြောင့်မနက်စာသို့မဟုတ်နေ့လည်စာအတွက်အထူးအကြံပြုလိုသည်။
အောက်ပါအကြောင်းအရာများတွင်စမုန်နက်လက်ဖက်ရည်နှင့် ပတ်သက်၍ သင်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာလိမ့်မည်။ အကျိုးကျေးဇူးများ၊ ၎င်းသည်အရသာခံဆေးနှင့်ဤအရသာရှိသောသောက်စရာနှင့်ပတ်သက်သောအခြားသက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များအနေဖြင့်အလုပ်လုပ်လျှင်၎င်းကိုမည်သို့ပြုလုပ်သင့်သည်ဆိုခြင်း။ ထွက်ခွာသည်!
စမုန်နက်လက်ဖက်ရည်သည်အကျိုးများစွာရရှိစေသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာ၎င်းသည်အာဟာရဓာတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် သံသွပ်၊ ကယ်လစီယမ်, ဗီတာမင်အေ, ရှုပ်ထွေးသော B, Cအပြင် အမျှင်.
စမုန်နက်လက်ဖက်ရည်သည်ရောဂါခံစားရသူများအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သည် ရာသီလာခြင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများ၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်းနှင့်မျက်စိနှင့်နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းကျိုးများအပြင်၊
နောက်ထပ်အရေးကြီးသည့်အချက်မှာစမုန်နက်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည်အခမဲ့အစွန်းရောက်များဟုခေါ်သောအိုမင်းခြင်း၊ ဆဲလ်ဓာတ်တိုးခြင်း၊ ကင်ဆာအမျိုးအစားများ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်လေဖြတ်ခြင်းတို့အတွက်တာဝန်ရှိသည်။
၆ လအရွယ်ကလေးငယ်များသည်မိခင်နို့ကိုသာတိုက်ကျွေးသင့်သည်။ ၎င်းတို့သည်အာဟာရများ၊ ကာကွယ်ဆေးများ၊ သွေးရည်ကြည်များအတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၄ င်းတို့ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ရန်နှင့်ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤအချိန်ကာလပြီးနောက်ကလေးငယ်သည်မိခင်နို့ကိုဆက်လက်သောက်သုံးနိုင်သည်၊ မိခင်နို့နှင့်အခြားအစားအစာများကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်နို့တိုက်ခြင်းကိုရပ်တန့်နိုင်ပြီးအခြားနို့တိုက်ကျွေးခြင်းသို့တဖြည်းဖြည်းကူးပြောင်းနိုင်သည်။
အကယ်၍ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကဤပစ္စည်းကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလျှင်ဒုတိယအဆင့်တွင်၊ ကလေးငယ်သည်စမုန်နက်လက်ဖက်ရည်ကိုသောက်နိုင်သည်။ ဤလက်ဖက်ရည်သည် colic ရှိကလေးများအတွက်အလွန်ကောင်းသည်၊ ၎င်းသည်ဘ ၀ ၏ပထမနှစ်များတွင်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည်နာကျင်မှုကိုအဆုံးသတ်ကြောင်းအလွန်မြင့်မားသောအာမခံချက်ဖြင့်သိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြထားသောဤပြproblemနာအတွက်ပင်တကယ့်ဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။
chamomile နဲ့ fennel tea ဆိုတာဘာလဲ။
သင်အပန်းဖြေချင်လျှင်ရောစပ်ခြင်းထက်ပိုကောင်းသောအရာမရှိပါ မျက်နှာဖုံး စမုန်နက်နှင့်အတူ။ လက်ဖက်ရည်ကို“ ကောင်းသောည၊ စင်ဒရဲလား” အဖြစ်အသွင်ပြောင်းပြီးပြောင်းလဲခြင်းအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအသီးအနည်းငယ်ကိုထည့်ပါ၊
စမုန်နက်လက်ဖက်ရည်ကြမ်းသည်အေးဆေးငြိမ်သက်စေသည့်အပြင်၎င်းသည်သင့်ကိုအိပ်ချင်အောင်မဖြစ်စေသော်လည်း၎င်းသည်စိတ်သက်သာမှုကိုခံစားရစေသည်။ သင်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များကိုအခြားဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သော chamomile (သို့) စိတ်အားထက်သန်သောအသီးများနှင့်ရောစပ်လျှင်သင်အိပ်ချင်ပါလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အားစိတ်ငြိမ်သက်မှုရှိစေသော်လည်းအိပ်စက်ခြင်းသည်လူအချို့အတွက်သာဖြစ်သည်။
လက်ဖက်ရည်တစ်မျိုးတည်းအတွက်အကောင်းဆုံးမှာအထူးသီးနှံများအရောင်းဆိုင်တွင်သို့မဟုတ်ပန်းအလှပြင်သူများ၌ပင်ဝယ်ယူထားသောလတ်ဆတ်သောအပင်ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏မြို့တော်၌သင်၌ခြောက်သွေ့သောမျိုးစေ့များသာရှိနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်လတ်ဆတ်သောပိုမိုကောင်းမွန်သော်လည်း၎င်းသည်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
စမုန်နက်၏လက်ဖက်ရည်ကိုပြင်ဆင်ရန်ရေတစ်လီတာကိုပြုတ်ပြီးစမုန်နက်မျိုးစေ့ဇွန်း ၃ ဇွန်းကိုထည့်ရမည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ၎င်းကိုအစေ့များဖြင့်ပြုလုပ်ရမည်။ အပူကိုပိတ်ထားပါ၊ ဒယ်အိုးကိုဖုံးအုပ်ထားပါ၊ ငါးမိနစ်ခန့်ရပ်တန့်ပါစေ။ သငျသညျလိုလျှင်, သကြားလုံးမပါဘဲမယူတာကအကောင်းဆုံးသော်လည်း, သင်ချိုနိုင်ပါတယ်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့်စမုန်နက်နှစ်မျိုးလုံးသည် antioxidant အပင်များဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏လည်ပတ်မှုနှင့်အဆိပ်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ ဒါကမင်းကိုကူညီလိမ့်မယ် ကိုယ်အလေးချိန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအစာခြေစနစ်တစ်ခုလုံးနဲ့၊ ဆီးထဲမှာရော၊ မလိုချင်တဲ့အဆီတွေ၊ ဆားတွေ၊ သကြားတွေ၊
ဟုတ်ပါတယ်, စမုန်နက်အေးဆေးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အလွန်အလင်းလမ်းအတွက်။ ၎င်းသည်အရွက်သို့မဟုတ်အသီးကိုသီးသောအသီးနှင့်မတူပါ၊ သို့သော်၎င်းသည်အေးဆေးတည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်မှုရှိသည်။
ငရုတ်ကောင်း: ဘယ်အပူဆုံးကဘာလဲ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုကိုအရှိန်မြှင့်ပေးနိုင်ပါသလား။